Posted on March 21, 2019, 12:29 pm
Mourners carry coffins as mourners attend multiple burials at the Chimanimani Heroes Acre on March 18, 2019 in Chimanimani, eastern Zimbabwe, after the area was hit by the cyclone Idai. – A cyclone that ripped across Mozambique and Zimbabwe has killed at least 162 people with scores more missing. Cyclone Idai tore into the centre of Mozambique on the night of March 14 before barreling on to neighbouring Zimbabwe, bringing flash floods and ferocious winds, and washing away roads and houses. (Photo by Zinyange AUNTONY / AFP) (Photo credit should read ZINYANGE AUNTONY/AFP/Getty Images)
Mozambique has begun 3 Days of National Mourning for Cyclone Victims. Mourning began Wednesday in Mozambique after one of the most destructive storms to strike southern Africa in decades killed hundreds of people.
Cyclone rage in Southern Africa: Zimbabwe and Mozambique hit
Triple Blessing: Fani-Kayode’s wife gives birth to three boys on her birthday